Shaqa la'aanta dhallinyarada oo aad hoos ugu dhacday sannadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tabeelle ay ku cayiman tahay tirada boosaska shaqo ee bannaan. sawir: Jessica Gow/TT
Shaqa la'aanta dhallinyarada oo aad hoos ugu dhacday sannadka
Farqiga suuqa shaqada oo sii ballaaranaya
La cusbooneeyay måndag 4 december 2017 kl 11.09
La daabacay måndag 4 december 2017 kl 09.17
Shaqa-la’aanta dhallinyarada ayaa gaartay heerkii ugu hooseeyay muddadii tobanka sannadood ee la soo dhaafay, sida uu qoray xafiiska shaqadu – Arbetsförmedling.
Dhanka kale waxaa kor u kacaya farqiga dadka u dhexeeya ee suuqa shaqada.
Xafiiska shaqada ayey ka diiwaan gashenaayeen bishii noveembar ee sannadkan dhallin-yaro da’doodu u dhexeeyso 18-24 jir oo shaqa-la’aani la soo gudboonaatay. Tiradaasina oo bar hoos u dhacday kolka loo barbar-dhigo muddo iminka shan sannadood ay ka soo wareegtay.
Goolkii sagaashanka maalmood ayaa la gaarey. In dhallin-yarada muddo 90 maalmood gudahood kolka ey iska diiwaan geliyaan xafiiska shaqada lagu casumo shaqo ama tacliin inay bilaabaan.
Dhanka kale waxaa kor u kacaya farqiga suuqa shaqada ee dadyoowga haysta shahaadada dugsiga sare iyo kuwooda aan heey-san.
–Waxaa la oran karaa in shahaadadu tahay xadka u dhexeeya ee suuqa shaqada. Waxaa sahlan sidii shaqo lagu heli lahaa kolka la haysto shahaadada dugsiga sare, halka ay kaga adag tahay in aad lugta la gasho suuqa shaqada kolka aadan heeysan shahaado, sida uu sheegay agaasimaha guud ee xafiiska shaqada Mikael Sjöberg.
Inkasta oo shahaadada dugsiga sare ay tahay shahaado hooseeysa?
–Waa dhab, laakiin kolka laga eego suuqa shaqada waa heer tacliineed wanaag-san. Haddii loo barbar-dhigo shaqa-la’aanta jaamiciyiinta ma jiro farqi ballaaran ee u dhexeeya.
Cabdifataax Maxamad Aaden wuxuu ka mid yahay dhallin-yarada ku dhaqan magaalada Norrköping. Cabdifataax Maxamad ayaa qaba in la’aanta shahaada dugsiga sare ay caqabad ku tahay dhalli-yaro badan ee ka soo jeeda dalka dibaddiisa, qaasatan Soomaalida:
-Waa dhab middaa ayaa caqabad ku ah, hase yeeshee waxaa jira shaqooyin aan u baahnayn shahaado dugsiga sare sida howlaha baqaarrada, sida uu sheegay Cabdifataax Maxamad.
Kolka laga yimaado xaaladda wanaag-san ee suuqa shaqada waxaa sidoo kale ka caawintay tirada dhallin-yarada oo hoos u dhacday. Waxaa sidoo kale uu is-bedel ku dhacay habkii ey shirkaduhu u qaadan jireen shaqaalaha, sida uu sheegay Mikael Sjöberg, agaasimaha guud ee xafiiska shaqada.
–Waxaa lagu xiraa shuruudo ka hooseeya ee waayo-aragnimo waxaa sidoo kale dhacda in la hagaajiyo shuruudaha tacliineed.
Cabdifataax Maxamad Aaden wuxuu dhallin-yarada soomaalida kula talinayaa inay dhex-galaan bulshada, middaasina oo u sahleeysa la qabsiga suuqa shaqada:
-Innagaa isla soconna, dhallin-yarada waddanka ma raacno. Kolka aad is barataan waxaad helaysaa xiriirkii goobaha shaqada, sida uu sheegay Cabdifataax Maxamad Aaden.
Maxaa hor taagan qaadashada shahaadada dugsiga sare?
Waa howl adag